Umshini Wokugcwalisa Ama-Acids & Corrosives - Micvd.com
NPACK ihlinzeka ngohlu oluphelele lwemishini yokugcwalisa imikhiqizo ebonakalayo ukuze ihlangane cishe noma yiluphi uhlelo lokusebenza. Kwenziwe kusuka ku-HDPE (i-polyethylene ephezulu yokuxineka kwabantu), le mishini yokugcwalisa, yokuhambisa kanye nama-turntable yenzelwe ukuphatha isijeziso sendawo egcwele ukugqwala lapho izakhi zensimbi ezijwayelekile zingavele zincibilike.
NPACK Amasistimu wokugcwalisa nge-poly asebenzisa izindlela zokugcwalisa i-volumetric, ezinembile kakhulu futhi zisebenza ngezindlela eziningi. Ama-filler enzelwe ukugcwalisa kusuka engxenyeni yegreyidi engaba ngamalitha ayisihlanu futhi ayakwazi ukuphatha ukubona okubonakalayo okusuka kumzimba omncane no-foamy kuya koketshezi obukhulu. NPACKUkwakheka okuhlelekile kungavumela ukwakheka kwemishini yokuhlunga ukuthi ibe namathangi amaningi futhi kugcwalise imihlangano yamakhanda ukuhlukanisa imikhiqizo engahambelani ngaphakathi kohlaka oluvamile. Konke NPACK izihlungi zakhiwa ukuhlinzeka ngenhlanganisela engcono kakhulu yokuguquguquka okuphezulu, ukusetha okulula nokushintshwa, kanye nesikhathi esincanyana sokulungiswa nokuhlanza. NPACK futhi lwenza lolu hlobo lwemishini yokufaka ibhodlela yezinsizakalo ezisetshenziselwa itafula.
Ama-poly conveyors nama-Turntables ayintuthuko yemvelo evela ku-poly filler futhi akhombisa ukuthi abe yimpahla ebalulekile kulabo abaphaka imikhiqizo ewonakalisayo.
Izicelo Zensiza ye-Acids & Corrosive Equipment:
Uketshezi olunamanzi omncane nolunwebayo
Uketshezi oluphakathi nendawo olubonakalayo
Ama-acid anjenge-hydrochloric acid
Amageyimu afana ne-sodium hypochlorite
Ukucaciswa Okujwayelekile Kwemishini Yemishini:
I-HDPE (ukwakhiwa okuphezulu kakhulu kohlelo lokugcwalisa ugesi we-polyethylene)
I-HDPE reservoir ene-poly float system
I-kynar noma i-Teflon igcwalisa ama-valve
Ama-tubing we-PVC we-Braided kanye nokufakwa kwe-polypropylene
Isibonisi sombonisi wesikrini
I-Tabletop, imishini yokugcwalisa okuzenzakalelayo ne-othomathikhi etholakalayo iyatholakala
Ukuvalelwa okungakhethwa komoya omncane nokuphepha kungenziwa nge-HDPE
Ukwakhiwa kwe-HDPE ne-PVC, i-Hardware yensimbi engenacala
I-belting yokumelana ne-HDPE eqinile
Ijubane elihambisanayo lemoto
UHLELO wesitimela onokulungiswa okungaphansi kwethuluzi
Ukujikeleza kwewashi noma kwewashi
NPACK Izinzuzo Zempahla Yebhodlela
Okokusebenza kwethu kwamabhodlela kufaka ukwakhiwa okuqine kusuka HDPE, UHMW, kanye nokwakhiwa kwe-PVC okugcina kufinyelela ezindaweni ezinobungozi.
Ukuhlanza okulula NPACKImishini yokugcwalisa yaklanywa futhi yakhelwe ukuvumela "ukushushuluza okusheshayo" okwandisa ukusebenza kwabo kokuhlanza.
Ukuvumelana nezimo, ukuguquguquka kwezinto kanye nokulula ukwenza izinto kuyizinto ezibalulekile kulolo nalunye lwezinhlelo zokugcwalisa esiziklama. Lokhu kuvumela imikhiqizo eminingi neziqukathi ukuthi zingaqhutshwa emshinini owodwa ngokushintsha amathuluzi okungaphansi. Ngokukhetha izindlela zokugcwalisa ezifanele, izinhlobo eziningi zemikhiqizo zingagcwaliswa.
Yonke imishini yethu yokufaka amabhodlela yenzelwe uhlelo lwakho lokusebenza oluthile. Umthamo wethangi, inani lamakhanda okugcwaliswa, izingxenye zokuxhumana, nobukhulu bozimele konke kuyenzeka ngokwezifiso zezidingo zakho ezithile.NPACK imishini yokugcwalisa ilula, kulula ukuyisebenzisa, futhi ifaka ukusetha okusheshayo nokushintsha. Ama-opharetha angagcina izikhathi zokugcwaliswa njenge- “zokupheka” zokusetha okusheshayo.
Ukusuka ekungeneni kwamazinga aphezulu etafula lokungena ekungeneni ezisebenza ngokuphelele ukuze kuphele izinhlelo zokugcwalisa ezinamandla, ochwepheshe bethu babheka zonke izinyathelo zokuklama, ukukhiqiza nokufaka imishini yakho yamabhodlela.
Umshini wokugcwalisa we-Acid Liquid Machine
Umshini wokugcwalisa uketshezi oluzenzakalelayo we-acid ungasetshenziselwa ukugcwalisa uketshezi oluxubile lwe-acid noma i-alkali njengendawo yokuhlanza indlu yangasese, ukukhipha uwoyela wasekhishini, okokuhlanza impahla, i-hand sanitizer, njll.
Umshini wemukela umugqa wokudlulisela block, ongasetshenziswa ezinhlotsheni ezahlukahlukene zamabhodlela.
Lo mshini wamukela isilawuli sesikrini sesikrini se-PLC, ukusebenza okuzinzile, ukulungiswa okulula. Ngemuva kokuthi izingxenye ezimbalwa zithathelwe indawo futhi kwenziwe ulungiso olufanele, amabhodlela engilazi namabhodlela epulasitiki eziphakeme ezahlukahlukene namadayimitha angagcwaliswa ngokuguquguquka okuphezulu kanye nobubanzi bezicelo.
Lo mshini uhlanganisa i-optical, mehendi, kagesi, igesi emshinini owodwa. Adupt ngokusebenzisa isikhathi sokugcwalisa sokufinyelela ukuze ugcwalise ivolumu ehlukile. Isikhathi sokugcwalisa singalawulwa ngokuqondile kuze kube sekhulu. Inqubo yokugcwalisa igcwaliswa ngaphansi kokulawulwa kohlelo lwe-PLC esikrinini sokuthinta. Ukuba nokusebenza okuzinzile nokuthembekile, ukusebenza kahle okukhulu, ukuzivumelanisa nezimo, isilinganiso sokugcwaliswa kwesilinganiso sokulinganisa singashintshwa ngemizuzu embalwa. I-valve yokugcwalisa isebenzisa imikhiqizo engenisiwe, ubuchwepheshe obuthuthukisiwe, ubuchwepheshe obungenasiconsi.
Ukwakhiwa kwesimbi okungenasici kwe-304, futhi izingxenye zokuxhumana ezixhumayo ziyi-316L insimbi engagqwali
Schneider PLC bese uthinta ukulawula kwesikrini
I-Servo motor Drived, eyodwa servo motor drive eyodwa piston, isivinini esikhulu kanye nokunemba okuphakeme.
Ivolumu enembile yokugcwalisa, ngaphakathi kwe-± 0.2 ye-1000ML
Asikho ibhodlela, akukho ukugcwalisa, isixwayiso ngokuzenzakalelayo kumaphutha
Ukugcwaliswa kwemibhobho evinjiwe kukhona amaconsi amancane, isilikhi, kanye nokunquma kwezimoto ezidakayo
Umlomo webhodlela ungatholakala uma kunesidingo
Umshini Wokugcwalisa Okugcwele Kotshani
Lo mshini wokugcwalisa i-Liquid Liquid umshini wobuchwepheshe wokugcwalisa nge-anti-corrosion. Ingxenye okuthintwe kuyo oketshezi Adopt impahla engeyona eyensimbi futhi iyithuluzi elihle. Kufanelekile ukugcwaliswa kweziphuzo ezahlukahlukene ezonakalisayo, njengokugeza iziphuzo, okokuhlanza indlu yangasese, okokuhlanza, izibulala-zinambuzane, i-vitriol, i-reagent, ect, esetshenziswa kakhulu kumakhemikhali, nasemikhakheni yemithi ..
1. Uhlelo lokulawula - ngohlelo lokulawula lweMitsubishi PLC, ukugcwalisa umthamo wokuhlenga okungahleliwe
2. Isixhumi esisebenzayo - isikhombimsebenzisi esibonisa umbala, isikhombimsebenzisi somuntu silula, siphephile futhi sinokwethenjelwa.
3. Izithuthukisi zesici - Ukusika ngedivayisi eyi-anti-Drip, ingashona ukugcwalisa ngezinto zokwakha. (Lesi sici singakhethwa ngokuzithandela)
4. Izakhi zikagesi - zisebenzisa imikhiqizo edume umhlaba wonke ukuqinisekisa ukuthi imishini ithembekile futhi inembe kakhulu.
5. Izakhi zemishini - izingxenye eziphambili zenziwe ngohlaka lwePP lwekhwalithi ephezulu, ingxenye yokuxhumana yenziwa ngama-silica ama-silica ama-silica enobuthi, ama-PTFE hoses, i-valve yi-PVC.
6. Izandiso - zingahlelwa ngokwezidingo ezithile zokulungiselela, njengoku:
7. Ukuhlolwa kokubala - ukubalwa kwesikhathi sangempela, kuboniswa ngokuphuma komsebenzi ngqo.
8. Ukutholwa Ukutholwa - Alikho ibhodlela, noma uma inombolo yokugcwalisa ibhodlela inganele, akukho ukugcwaliswa.